I-Apache OpenOffice 3.4 iyatholakala. Noma ubani onentshisekelo? | Kusuka kuLinux
Uxolo ngabasebenzisi be I-OpenOffice kodwa ngizoba "okubabayo okushisayo" ngale ndatshana, njengoba izobhalwa ngaphansi kombono wami oqotho kakhulu ngalokhu Ihhovisi Suite, okubonakala kimi, ilahlekelwe ukwethenjwa kwezigidi zabasebenzisi.
Ngikubona kuthusa ukuthi kuqala kanjani isikhangiso Kukhishwe ngu Apache maqondana nale nguqulo entsha:
Izithuthukisi eziningi zemithombo evulekile yokuhola, yamapulatifomu amaningi, i-Office Suite yezilimi eziningi, enabasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-100 emhlabeni jikelele; ukulanda manje kuyatholakala ngeWindows, Linux neMacintosh mahhala.
Futhi ngifunda yonke le ndatshana nginokungabaza okumbalwa:
Nini I-OpenOffice uke kwadingeka ukulanda ukuyikhokhela?
Abasebenzisi abayizigidi eziyi-100? Ngokuzimisela? Ngingayibuka kuphi ngokuthembekile leyo datha?
Ngolwazi ezinalo, I-OpenOffice ibitholakalela i- Windows y I-GNU / Linux… Angazi noma nge-OS X. Noma nginephutha?
Noma kunjalo, angiqondi ukuthi kuza ini Apache Ngakho konke lokhu manje, sizama ukuthola ngamehlo ethu umkhiqizo ohlonipha iqiniso Yini entsha ngaphandle kokusebenzisa ilayisense entsha? Kubonakala kimi ukuthi abafana be Apache bashaya amabhaluni amaningi ngalezi zindaba. Ingabe ukuphelelwa yithemba lokuhlanganisa kabusha Umphakathi ozizwa ukhululekile ngawo LibreOffice phansi Isisekelo sedokhumenti?
Masibone ngenhla isiqeshana semininingwane okufanele siyicabangele.Yini ukusatshalaliswa okusetshenziswa kakhulu noma okudumile kwe I-GNU / Linux? Ubuntu njengoba besho, akunjalo? Yiliphi ihhovisi suite eliza ngokuzenzakalela Ubuntu? Ngoba ngokwazi kwami ​​akunjalo I-OpenOffice. Ingabe lokhu akuthinti izibalo ezihlinzekwa ngu- Apache? Futhi ngikhuluma ngakho Ubuntu Ngingakhuluma kanjani nganoma yikuphi okunye ukusatshalaliswa, ngoba abaningi bakhethile LibreOffice ngemuva kwezinguquko zesandla esihluphekile I-OpenOffice ngemuva Oracle kutholakele I-Sun Microsystem.
Ngibona izixazululo ezimbili ezikhona kukho konke lokhu:
O Apache yeka ukuchitha umzamo futhi ujoyine LibreOffice.
O Apache shintsha ngokuphelele iSuite (isikhombimsebenzisi sifakiwe) ngezindaba zangempela zokusetshenziswa kwabasebenzisi.
Ngiqonde ukuthini ngalokhu? Ukuthi angikhathali kancane uma I-OpenOffice ikhipha inguqulo engu-5.0. Uma ekugcineni kungalethi lutho olufanele futhi ngiphinda, kufanelekile ngempela, angiboni ukuthi kungani kufanele ngiyeke ukusebenzisa LibreOffice, lapho kuze kube manje, abafana be Isisekelo sedokhumentibakhombisile ukuthi basebenza kanzima ukuthuthukisa i- Ihhovisi Suite.
Angazi ngawe, kepha yindlela engibona ngayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Apache OpenOffice 3.4 iyatholakala. Noma ngubani onentshisekelo?
Ku-osx nayo ibitholakala empeleni, futhi inguqulo entsha nayo iyatholakala xd, ngokuthembeka kuyefana ukusebenzisa i-openoffice noma i-libreoffice, umehluko omkhulu ngeke ubonwe.
Akunjalo. LibreOffice ithuthukise ikhodi eningi engasasebenzi ekhona ku- I-OpenOffice.
Ungasikhanyisela ngalokhu okushoyo? Angikusho lokhu ngaphandle kwenhloso, ngimane nginentshisekelo enkulu kulesi sihloko.
I-TDE ingasebenza njengesethenjwa sokubona ikhodi yomthombo yakho kokubili i-openoffice ne-Libre Office bese uyiqhathanisa:
Mahhala Ihhovisi: http://cgit.freedesktop.org/?s=idle
Kepha uma uvilapha, ubona kangcono ukuthi okwenziwayo ekwakhiweni kwehhovisi lamahhala kuphakeme kakhulu kunokwasehhovisi elivuliwe, ngicabanga ukuthi kuyindlela yokuqinisekisa ukuthi ikhodi yenziwe kahle kakhulu eLibre Office ngokungafani nase Open Office.
Kuhle lokho .. indlela enhle yokuqhathanisa .. Siyabonga ngethiphu.
Ngibonga kakhulu kubo bobabili. Ngizozinika umsebenzi wokuhlaziya kancane.
Kuyamangaza ngempela futhi ngendlela ethile, engaqondakali, lezi zindaba ezivela kusisekelo se-Apache, ukuphela kwento engingacabanga ngayo ukuthi ihlose ukwenza umsindo ukuze bakwazi ukubona i-OpenOffice ngamehlo amasha. Okwe- "ukwehliswa isithunzi", kungcono ngisho nokukhuluma, konke ngenxa ye-Oracle, eyodwa eyodwa ¬.¬.
Okuthile engingakuqondi kungenxa yokuthi uma unekhodi yomthombo ye- I-Lotus symphony, Akazange ayisebenzise ngokugcwele, kufanele ngivume ukuthi ngiwusebenzisile futhi nomqondo wokuthi i-IBM inikeze ngalo mkhiqizo wawumuhle kakhulu, wawunamaphutha awo amakhulu, njenganoma yiluphi uhlelo lokusebenza, ezinye izilima, uma uthanda, kodwa phela. Ukube i-Apache ibikwazile ukusebenzisa leli phuzu, bekungabeka iLibreOffice enkingeni enkulu. Elinye iphuzu okufanele ulicabangele ukuthi: ngoba i-Apache iyawusekela umqondo wokuqhubeka nokuqhekeza abasebenzisi ngokubenza bathathe isinqumo phakathi kweLibreOffice neOpenOffice, yini ukusetshenziswa kwento enjengale? Angiqondi, umsebenzisi akadingi ukwahlukaniswa okuningi, udinga izinketho / izixazululo ezingaphezulu nangcono., kuyinto ecasula kakhulu ...
Uma unaka ukuthi izikhungo eziningi zisebenzisa Ubuntu 10.04 lts ngaphandle kokubuyekeza, uzobona ukuthi i-openoffice isekhona kahle emhlabeni wezemfundo.
Kepha inani lezikhungo ezisebenzisa Ubuntu LTS ... woza, aziziningi kangako, kude nalo.
Ubuntu mhlawumbe cha, kahle kahle emayini kukhona okwenzayo, kepha iningi lisebenzisa iMax, iMadrid distro esekwe ku-Ubuntu futhi nayo eyi-shit, ngoba kwesinye isikhathi ishayisa ngenduku ye-USB.
Leyo nkinga ye- "USB" yenzeke kimi kaningi ngeGnome ¬.¬, ungangikhumbuzi, uma nje ngilayishe i-Arch + Gnome3 ngesehlakalo esifanayo ¬.¬
Ayikho ikhompyutha eyodwa emtatsheni wezincwadi lapha ongesabi ngayo lapho ubeka i-pendrive, noma ukuthi i-pendrive kwakunguMedusa.
Kepha woza, ukuthi ubuchwepheshe benzelwe abantu abasha, hhayi wena.
XD, okufanayo kufanele kushiwo imbuzi engu-14 noma engu-15 kini eyi-XDDDD
Uma bengasebenzisi i-ubuntu lts, ​​basebenzisa i-distro bona ngokwabo esekwe kubuntu, lapha eCatalonia ngokwesibonelo kukhona i-linkat nazo zonke izikhungo eziza naleyo distro eza nehhovisi elivulekile, futhi ziningi zazo. Isikhungo esibucayi akufanele sisebenzise ama-distros aphuma njalo ezinyangeni eziyi-6, kepha ama-distros azinzile angadingi ukuvuselelwa, kepha afriziwe anele.
Nginemishini efakwe lapha nge Ubuntu 8.04 futhi banazo LibreOffice 3.5, njengoba ingafakwa ngaphandle kwezinkinga. Ngakho-ke, ungaba ne-distro ezinzile nale suite yehhovisi futhi akudingeki ukuthi ibe njalo I-OpenOffice.
Lowo onakekela ukufaka i-distro, umane ayifake kanye ne-period, ngalokho okuzayo kuhlala kunjalo, into ukuthi uyibona ngombono womsebenzisi, ehluke kakhulu kunaleyo yothisha wesikole sikahulumeni one- ubuntu disk esandleni.
Angazi ukuthi izinto zisebenza kanjani eSpain, kepha lapha, ngokwesibonelo, ngisebenza esikhungweni semfundo, futhi ngiphethe ukunikeza othisha nabafundi amathuluzi angcono kakhulu okusebenza. Ngicabanga ukuthi kulezo zikole zikahulumeni, kufanele kube khona umuntu ophethe okufanayo, aphenye, avivinye futhi asebenzise okuhle kakhulu kunqubo yokufundisa / yokufundisa.
Ngicabanga ukuthi kulezo zikole zikahulumeni, kufanele kube khona umuntu ophethe okufanayo, aphenye, avivinye futhi asebenzise okuhle kakhulu kunqubo yokufundisa / yokufundisa.
Kwezami kunokuthile okucishe kufane nalokhu, ngoba kukhona "uchwepheshe", uma ungambiza kanjalo ngoba akanalo ulwazi lokukhwabanisa ngamakhompyutha, okunguyena olungisa futhi afake izinto.
Kwesinye isikhathi ngibukeka njengochwepheshe ...
I-OpenOffice ibalulekile kimi njengoba i-Oracle iyikhathalela - kabi!
Ngifaka kuTwitter ukuthi i-OpenOffice ithandwa kakhulu ngabasebenzisi beWindows kuneLibreOffice; futhi nginezela kulokho okushiwo yi- @ pandev92, iRed Hat, ngakho-ke iCentos, nayo isebenzisa i-OpenOffice. Uma sinokusekelwa kwesigqoko esibomvu, angicabangi ukuthi kubi njengoba kupendiwe. Futhi, ngithanda ukwazi ukuthi yini umehluko wangempela okhona phakathi kokunye nokunye, ngale kokuncipha kwekhodi. Angivikeli inqubomgomo esetshenziswe kule suite, kepha masingakhohlwa ukuthi ngaphandle kwayo i-LibreOffice ngabe ibingekho.
redhat abantu, abasasebenzisi i-openoffice, sebenakho ukuphikisana ne-oracle, (sengivele ngizama ukuthenga i-redhat), ngethembe ukuthi basebenzisa i-libreoffice
Njengamanje senginokuzethemba okukhulu ku-libreoffice njengephrojekthi, umkhiqizo kanye nomphakathi. Futhi yize i-libreoffice iphume kwi-openoffice, i-LO yiphrojekthi kusukela ekuqaleni ikhombisile ukuthi ibisebenza kakhulu kune-OO futhi engabonakala ezinhlelweni zayo zentuthuko nalokho ekubonisile kuze kube manje.
Ngendlela engikuhalalisela ngayo ngewebhusayithi yakho inhle kakhulu futhi inokuqukethwe okuhle kakhulu.
Sizama ukwenza konke okusemandleni ethu 🙂
I-Apache ithatha isikhathi eside ukukhipha inguqulo entsha ye-OpenOffice. Ngokubona kwami, iLibreOffice isivele iphumelele impi noma, njengoba thina baseVenezuela sisho, sengivele ngine-brunette xD
Ngicabanga ukuthi bazama ukwenza umsindo nge-OpenOffice, ukuyivuselela. Futhi ngicabanga ukuthi kuhle.
Khumbula okwenzekile ngeFirefox, ngoba ibingenawo umncintiswano wangempela, kuze kufike i-Chrome, ibiphumule.
Noma ngabe kungenzeki kanjalo kwiLibreOffice, kulungile ukuthi i-Apache ihambe kancane.
Kuwubuwula ukwenza umuntu ofile enze sengathi abantu bakholelwa ukuthi usaphila kanti iphunga selivele limnikeze yena. Uxolo ngokufaniswa okuhle, kepha ngibona sengathi konke lokhu yikho manje. ILibreoffice iwine lo mjaho kudala, i-TDF yenze umsebenzi oncomekayo, ikakhulukazi ekuhlanzeni ikhodi (ebonakalayo ekusebenzeni kusuka ku-3.4 kuye phambili) futhi bathole umkhiqizo mhlawumbe odinga ushintsho kuphela isithombe (shiya ukubukeka kwe-Office 2000). Ngicabanga ukuthi i-Apache kufanele ivumele iphrojekthi engenalo ikusasa ukuthi ife ngokuthula noma inikeze enye indlela yangempela.
Ngicabanga ukuthi awulungile ukwahlulela i-OpenOffice futhi ikakhulukazi i-Apache Software Foundation ngale ndlela.
Ngemuva kokuthi i-Oracle ilahle i-OpenOffice futhi iguqule i-Apache Foundation ekugcineni i-OpenOffice, kuye kwadingeka bathathe okuthile ababengenaso isibopho sokwenza.
Futhi ngicabanga ukuthi unephutha uma uthi (futhi uthi) okuwukuphela kwendlela engenzeka ye-Apache ukujoyina iLibreOffice noma ukuvumela i-OpenOffice ife. Kukhona enye indlela futhi ukuqhubeka nokuyithuthukisa, ngoba siyakhumbula ukuthi i-IBM inikele ngekhodi le-Symphony ku-Apache Foundation, okuzosho ukuthi, lapho bethula le khodi emuva ku-OpenOffice, izokwenza ukuthi bobabili i-OpenOffice neLibreOffice bazuze kakhulu.
Uphinde wenza iphutha uma ucabanga ukuthi ngoba Ubuntu (noma iningi lama-distros) lisebenzisa i-LibreOffice, lenza leli suite lithandwa kakhulu (noma lisetshenziswe kakhulu) kuma-suites amahhovisi amahhala, ngoba, njengoba besho ngaphambili, I-OpenOffice isakazeke kakhulu ku-Windows kune-LibreOffice. Masingakhohlwa ukuthi kunezikhungo eziningi ezifudukele ku-OpenOffice eminyakeni yamuva, ngaphezu kwezinkulungwane zabasebenzisi abasebenzisa i-OpenOffice kulolu hlelo lokusebenza.
Ngakolunye uhlangothi, ngangihlekisiwe ukubona inani lokugxekwa kwe-OOo kubantu abangazi ukuthi bakhuluma ngani.
Ekugcineni, ngingasho nje, ukwehluka kwempilo!
Ngaphezu kwakho konke lokho, ngikhohliwe ukungeza lokho njengamanje, bobabili i-OO ne-LO bathola impendulo ngokuthuthuka kumasudi ama-2.
Ngasho ekuqaleni ukuthi lo mbhalo ubususelwa embonweni wami, bengingalindele ukuthi bonke abanye bazocabanga ukuthi nginobulungiswa.
Okungalungile ngokombono kabani? Ngiyaphinda ngithi, umbono wami, angiyena umhlaziyi noma isazi sezibalo. Uma kuningi Apache, njenge TDF, sebenza emzileni ofanayo, ukuthuthukisa, ukugcina nokuhlinzeka nge- I-Open Source Office Suite Liyini iphuzu lokusebenza ngokuhlukile? Ngabe bekungeke kube ngcono nge Apache qhubeka nokuzinikela kulokho okwaziyo ukukwenza futhi ushiye (noma uxhase) umsebenzi we TDF ozinikele ngokuphelele ku LibreOffice?
Futhi lokho kunegama elilodwa kimi: Ukungazi. I-OpenOffice ugqashule njengo I-Open Source Office Suite ethandwa kakhulu ngesikhathi sakhe, ngakho-ke njengoba isisho sihamba, kimi lokho nje: Phakamisa udumo, ulale. Noma ngubani olandele umkhondo izicelo zombili, futhi ubonile umzila owathathwa bobabili kusukela lapho SUN udlulile emhlabeni, uzokwazi ukuthi okwamanje, LibreOffice kungcono, ukuthi inokuthuthuka okusebenzayo futhi ngiyaqiniseka, lokho I-OpenOffice ukhiphe le nguqulo entsha, esebenzisa ukuthuthuka okuningi okufakwe ku- LibreOffice.
Enye into AnnubisKufanele wazi ukuthi akuwona wonke umuntu owabelana ngombono ohlukile kowakho ongalungile, ngoba awunembile ngokuphelele ngalokho okucabangayo nokuncane kakhulu, ungumuntu onamandla onke othi lokho kulungile noma cha.
Ngicaphuna owami amagama, uma kwenzeka engacaci:
Creo ukuthi awukhethi ...
Y Ngicabanga ukuthi unephutha uma uthi ...
Okungalungile ngokombono kabani?
Ngokwami ​​umbono. Okwami, okwami ​​nokungadluliseki, kulungile?
Futhi lokho kunegama elilodwa kimi: Ukungazi.
Kuzoba ngenxa yokungazi. Kepha, uthanda noma ungathandi, iLibreOffice akuyona indawo evulekile yomthombo ovulekile, noma ngabe abasebenzisi bayo bangazi kangakanani.
U-Elav, Ngazi kahle kamhlophe ukuthi akuwona wonke umuntu onombono ofana nowami onephutha nokuthi anginaphutha ngokuphelele nokuthi ngingase ngibe nephutha kuzitatimende zami. Kepha ngaphezu kwakho konke, khumbula ukuthi engikushilo futhi kuyimibono yomuntu siqu (yingakho esho Ngicabanga esikhundleni Ngiyaqinisa.
Futhi ukuze uqede, ngikutshele ukuthi ngokuba namandla onke, uhambe kancane, noma ingabe ukwazi ukuveza imibono yakho kanti abanye abakwazi, noma ngabe baphikisana kangakanani nokwakho? Buyekeza ukuphawula kwami ​​futhi futhi uzobona ukuthi angenzi izitatimende, kepha nginikeza imibono yami.
Futhi ukukucacisa ngokuphelele. Ngikutshele ukuthi bengingahlosile ukudala impikiswano lapho ngisebenzisa ukuphawula kwami, uma kungenjalo ukubamba ingxoxo yobungani, impikiswano ngalesi sihloko.
Ngoba manje ngibona abaningi behlasela i-OO (angisho ukuthi wena, Elav), ngithi kuyaphindwa ukuzama futhi. Kuyathakazelisa ukubona bona laba bantu bevikela ukusatshalaliswa okunobukhulu obukhulu, ngoba bashintsha kuphela ukusatshalaliswa okwakhelwe khona iphephadonga, ingqikithi yengcaca nokunye okungamampunge okungu-2, kushiwo ukuthi ukwehluka kuhle. Izinga eliphindwe kabili lokukala izinto lapho sinentshisekelo 😉
Ngiyaziphinda: Ukwahluka okude!
Ndoda, mhlawumbe ngisebenzise njengoba usho, kepha akufani ukusho:
Ngicabanga ukuthi unephutha
Angihlanganyeli nawe .. noma angicabangi ... into enjalo
Yebo, njengoba usho: Ucabanga ukuthi nginephutha ngokwalokho okucabangayo, futhi yize ungakukhombisi ngqo, kufana nokuthi umbono wami awulona iqiniso njengowakho. Kepha akukho, ngakho-ke asiqhubeke nempikiswano yobungani, yize ngingakaze ngiyithathe ngenye indlela.
I-FreeOffice YONKE INDLELA
Ukunambitha imibala. Futhi ukunikeza umbono, umuntu kufanele azazise. Futhi uma wazisiwe, uma idlulisa, yazisa kahle. Futhi ngiyaxolisa, ngoba ngicabanga ukuthi le ndatshana ayikusebenzisi lokhu.
Angivumelani nalokhu okushoyo, kepha ngiyakuhlonipha ukuthi unombono.
Ngokuqondene nokuhunyushwa kwakho kwesikhangiso se-Apache, kufanele ucije amagama ukuze usihumushe kanjena. Okuningi njengoba bekuyisimemezelo esifanayo senguqulo engu-3.0, 3.1, 3.2 no-3.3 we-OOo.
Uma noma ngubani enentshisekelo yokwazi ukuthi yini okusha kwinguqulo 3.4, angathatha uhambo evolice.es, lapho uzothola khona i-athikili ngeSpanishi ekhuluma ngazo zonke ezifakiwe kule nguqulo.
Futhi uma ucabanga ukuthi i-ASF ibiklwebha ikhala layo, funda i-athikili efakwe kubhulogi labo https://blogs.apache.org/OOo/ ikakhulukazi umsebenzi owenziwe kusuka "kwisipho" se-Oracle.
Konke lokhu kuphawula, kunjalo, "ngombono wami."
Okokuqala, kuyintokozo ukuba nawe lapha.
Bengingazi ukuthi "umbono" wami ube nomthelela onjalo. Ngizomhambisa ngezwi lakhe futhi ngifunde, ngesi «Spanish», izinguquko zifakiwe I-OpenOfficeKodwa-ke, bengingalindele ukuthi umuntu onjengawe, okusobala ukuthi usekela / athuthukise / athuthukise I-OpenOffice, vumelana nami. Kodwa-ke, angifuni ukuqala impikiswano ezophela njengezakudala: "KDE vs Gnome", noma "I-Windows vs Linux". Futhi kusobala, ngibhale lokhu okuthunyelwe ngokususelwa kundatshana eshicilelwe esizeni se- I-OpenOffice.
Ngicabanga ukuthi into yokuqala kuzoba ukucacisa ukuthi anginanto engimelene nayo I-OpenOfficeEsikhundleni salokho, ukuzethemba kwami ​​kuphrojekthi kumane kwehliswa ngokulahleka kwesisindo konjiniyela bayo abakhulu, abahlangana ukudala TDF Noma nginephutha? Angiyena omunye wabasebenzisi "abahamba ngenombolo yenguqulo" abashiya eceleni ikhwalithi. Ngibone "imiphumela" ku LibreOffice leso sikhathi esincane kakhulu, kunangesikhathi lapho iphrojekthi yayiyingxenye ye- SUN.
BTW. Ukuze ngingakhulumi ngokungenasisekelo, bengibukeza izinguquko ezichazwe ibhulogi yakhe, futhi njengoba ngingenaso isikhathi esiningi, ngenze okulandelayo: Ngavula LibreOffice futhi bengibheka ukuthi ngabe nginazo yini izindaba ezifakiwe i-AOo. Angazi noma kwenzeke ngengozi yini, kodwa phakathi kwalabo ebengikufuna (ikakhulukazi labo abanesibonelo sokuqhafaza), sezivele zitholakala nge LibreOffice 3.4. O_o
Ngiyazibuza, noma-ke, ngicela ukukubuza ukuthi ngubani ogxile kakhulu kule ndaba: Zingaki zalezi zinguquko ezifakiwe Apache? Ngabe akukho okunye kwalokhu kuthuthukiswa okuthathiwe emsebenzini owenzile TDF? Inhloso yami ngalo mbuzo ukumane wazi, ungathathi ngendlela engafanele. Noma kungabonakala kungafani nayo, angiyena umuntu okhuluma ukukhuluma, kancane.
Ngiyethemba futhi I-OpenOffice ezandleni ze Apache ukukhula, ukuvuthwa, ukuthuthuka, kepha ngiyakutshela, ngisabona njengenye indlela engcono yokuthi womabili amaphrojekthi ahlangane futhi enze yonke imizamo yawo ekwakheni umkhiqizo ongcono wabasebenzisi be I-Linux, iWindows y Mac.
Ngethemba futhi i-OpenOffice ezandleni ze-Apache iyakhula, iyavuthwa, iyathuthuka, kepha ngiyakutshela, ngisabona enye indlela engcono kakhulu yokuthi amaphrojekthi womabili ahlangane futhi enze yonke imizamo yawo ekwenzeni umkhiqizo ongcono wabasebenzisi beLinux, Windows ne-Mac .
Lokho kungavumeleka kuma-90% we-Linux distros, izinkulungwane zezinhlelo zomculo, ividiyo njll njll ezifanayo ezenza okufanayo futhi ezinganikeli ngalutho olusha, kodwa ngeke kwenzeke, yi-utopia
Ngikufisela inhlanhla "mngani", ngikholelwa ezinhlobonhlobo ...
U-Ooo ikakhulukazi wanginikeza isisombululo lapho ngidinga i-office suite.
Kuthiwani uma kuvuka ukushintshwa kwezandla, lowo muzwa wokungaqiniseki awumnandi neze, ngiqonde ukuthi, kukhona izinketho kepha uyalithanda leli suite.
Uma ngicabanga ukuthi isikhangiso se-Apache sithandeka kakhulu.
Imizamo yokujoyina ilungile, kepha ukwehluka kuyinto enhle kunokuba inkinga.
Omunye umbuzo ngezinsizakusebenza kepha kwenzekani ngemiklamo emisha… ingabe ayinakulungiswa? Noma ngabe kukhona umuntu ocabanga ukuthi angajoyina (uma ungakwazi futhi akuvumela) kulokho okukhona, noma okungcono ukuthi akukho.
Ngaleso sizathu angiyiboni "inkinga", inhlanhla kubo bonke nokuthi kunezinye eziningi.
Cishe akekho onentshisekelo, inokulandwa okuyisigidi esisodwa ezinsukwini eziyi-1… openoffice.org/news/aoo8-34M.html 😛
Yebo, uma nginentshisekelo, i-Apache Openoffice iphuma nokubambezeleka okude, futhi yize kuyiqiniso, ihhovisi leLibre linokwamukelwa nokwesekwa kokunye ukusatshalaliswa kweLinux okuthandwa kakhulu okwamanje, noma kunjalo, uhlu Izinguquko Akumele zithathelwe phansi, izinguquko ezijulile kakhulu zenziwe ngokubuyekezwa kwekhodi nokusebenza kwayo, futhi yize zibonakala zinguquko ezincane ekusebenzeni, lezo abazenzile zithakazelisa futhi zenziwe kahle, ngamafuphi, zikhiphe umkhiqizo obukeziwe kakhulu , ngaphandle kokuthuthuka nokuthi lokho kuhlala kukuhle…
Ngifake ama-distros amabili, i-Fedora 16 ne-Debian 6.0.5, futhi ngivivinye i-Fedora kuphela kepha ngabona okuthile okuzwakala kungangimangazi kubhekiswe kwifilosofi ngayinye, i-Fedora iza ne-Libre Office ne-Debian iza ne-Open Office .
Akufanele yini kube ngenye indlela?
Lapho iDebian 6 iphuma, bekungekho mahhala.
UMariano Gaudix kusho
Sanibonani bantu, ngifunde ukuhlelela okuthile ku-GTK 3.0, Vala (GTK 3.0) nasePyGtk 3.0.
Ngibhale isikhombimsebenzisi esibonakalayo sokuqhafaza seWIDGET sehhovisi lehhovisi …………. Ngikhawulelwe ngoba ku-GTK 3.0 awekho amawijethi amaningi ………… .Kodwa ngehlulekile ukwenza konke okusemandleni ami …… .. empeleni ngilwakhele lolu hlelo i-DEMO noma umqondo ……………… .. futhi bengifuna bona imibono yakho ngokuhlonipha .... ube nayo uma siyithuthukisa.
Umklamo wami awususelwe ku-OFFICE 2010… .. ngifuna okuthile okulula okungikhumbuza i-interface ye-GOOGLE + noma i-CHROME ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Angiyithandi iMENUBAR yakwaGTK futhi ngiyisusile engiyidizayinile ………… .. ngifuna ne-symmetric proportion. Noma uma uthanda ukwakheka kwePAULOP.
Bengikhuluma kancane nabantu be-LIBREOFFICE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ngokuba Ulimi olubhaliwe lwe-C ++ lufana neBORLAND C ++ yezinhlaka zokuxhumana ezinemifanekiso ……. …… .. ukuthi bayifaka ku-LIBREOFFICE iphasela elincane elilingisa amawijethi we-GTK 2.0 ne-GTK 3.0 …………… .. lokhu kuqashelwa ku-COMBO BOX lapho ukhetha isitayela se-LIBREOFFICE ne-SCROLLBAR ………… ……….
Uma i-LIBREOFFICE ibinesixhumi esibonakalayo esibhalwe ngolimi oluhambisana ne-
I-GTK 3.0 ibukeka buhle kakhulu. Kepha lowo ngumsebenzi omningi wohlelo …… kufanele uphike ukuhambisana kwemitapo yolwazi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phendula uMariano Gaudix
Kuleli qophelo lapho uzama ukungenisa idokhumende noma isethulo esivela ehhovisi leMicrosoft LibreOffice namanje asikwazi ukuguqula izithombe zama-metafiles amawindi noma ama-metafiles athuthukisiwe noma kunguqulo yawo yakamuva. Noma kunjalo, i-OpenOffice ikwenze kahle. Ngigcine ngokulahla iLibreOffice ukubuyela enguqulweni yakudala ye-Oracle OpenOffice. Ngaphandle kokungabaza, nginentshisekelo yokuzama i-OpenOffice ye-Apache.
Yebo, ngokubona izithombe-skrini ze-aoo 4.0, iqiniso ukuthi kubonakala kimi ukuthi i-libreoffice iyanda, okungenani kubuhle nokusebenza kwayo, nasekungeniseni nasekuhambisaneni nehhovisi… .. mmmmmmm…. Kubonakala kimi ukuthi ngizoyinika ithuba
Ubunye ngokuphelele. (Kuhlelwe)
Ungayifaka kanjani i-Xfce 4.10 ku-Ubuntu 12.04